शीर्षकमा बाइबल पदहरू: गरीबलाई मद्दत गर्दै -> थप
थप: [गरीबलाई मद्दत गर्दै]
एउटा कुराचाहिँ उनीहरू सबैले भने, खाँचो पर्ने गरीबहरूलाई सम्‍झिनुपर्छ। त्‍यही कुरो गर्न म पनि उत्‍सुक थिएँ।
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिमी साँच्‍चै ठीक हुन खोज्‍छौ भने गएर भएभरको सम्‍पत्ति बेचेर आएको पैसा गरीबहरूलाई देऊ र तिमीले स्‍वर्गीय धन पाउनेछौ अनि आएर मेरो पछि लाग।”
 येशूले आफूलाई निम्‍त्‍याउने अगुवालाई भन्‍नुभयो, “भोज लाउँदा तिमीले खालि आफन्‍त, दाजुभाइ, इष्‍टमित्र अनि धनी छरछिमेकीहरूलाई मात्र ननिम्‍त्‍याऊ। तिनीहरूले पैंचो तिर्न तिमीलाई पनि बोलाइहाल्‍छन्। बरु भोज लाउँदा गरीब, लुला-लङ्गडा र अन्‍धाहरूलाई निम्‍त्‍याऊ। तब तिमी धन्‍य हुनेछौ किनभने तिमीलाई पैंचो तिर्ने तिनीहरूसँग केही पनि हुँदैन। तर परमेश्‍वरको आज्ञा सामु ठीक हुने मानिसहरू मरेकोबाट बिउँतदा परमेश्‍वरले नै तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ।”
 त्‍यसपछि येशूले आफ्‍ना चेलाहरूलाई हेरेर भन्‍नुभयो, “हे गरीब हो! तिमीहरू कति धन्‍य हौ किनभने परमेश्‍वरको राज्‍य तिमीहरूकै हो। हे भोकाउनेहरू हो! तिमीहरू कति धन्‍य हौ किनभने तिमीहरू अघाउनेछौ। हे रुनेहरू हो! तिमीहरू कति धन्‍य हौ किनभने तिमीहरू रमाउनेछौ।
२ कोरिन्थी ८:९
हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टले गर्नुभएको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहै छ। उहाँ धनीभन्दा धनी भएर पनि तिमीहरूका लागि गरीब हुनुभयो। आफ्‍नै गरीबीले तिमीहरूलाई धनी बनाउन उहाँले यसो गर्नुभयो।
प्‍यारा भाइहरू, सुन। के परमेश्‍वरले संसारका गरीबलाई विश्‍वासमा धनी बनाउन र प्रतिज्ञा गरेको राज्‍य उहाँलाई माया गर्नेहरूलाई दिन छान्‍नुभएन र?
गरीबहरू त तिमीहरूसँग सधैँ हुन्‍छन् अनि उनीहरूको जहिले पनि भलाइ गर्न सक्‍छौ! तर म त तिमीहरूसँग सधैँभरि हुँदिनँ।
गरीबलाई दिनु परमप्रभुलाई दिनुजस्‍तै हो, उहाँले त्‍यसको प्रतिफल दिनुहुन्‍छ।
दानी भई दरिद्रसित आफ्‍नो खानेकुरा बाँडेर खाओ, तिमीले आशिष् पाउनेछौ।
कसैले दरिद्रको पुकार सुनेन भने त्‍यसले सहायताको निम्‍ति पुकार गर्दा पनि कसैले सुन्‍नेछैन।
अनि तिमीसँग माग्‍नेलाई देओ र ऋण माग्‍नेलाई पनि ऋण देओ।
 “जब तिमीहरू आफ्‍ना खेतबाट अन्‍न बटुल्‍दछौ, खेतको किनाराका बाली नकाट्‍नू र छाडिएका अन्‍नका बाली काट्‍नलाई फर्की नजानू। टिप्‍दा छाडिएका वा भूइँमा झरेको अङ्‌गुर टिप्‍न फर्केर दाखबारीमा फेरि नजानू, ती गरीब र विदेशीहरूका लागि छोडिदिनू। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वर हुँ।
संसारको धन-सम्‍पत्ति हुनेले आफ्‍नो भाइको खाँचो देखेर पनि मन कठोर पार्छ भने कसरी त्‍यस्‍तो मानिसले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छ?
 “परमप्रभु तिम्रा परमेश्‍वरले दिन लाग्‍नुभएको देशका कुनै सहरमा एउटा सङ्गी इस्राएली अभावमा छ भने तिमीहरू स्‍वार्थी बनी उसलाई मद्दत गर्न इन्‍कार नगर। त्‍यसको सट्टामा उदार-चित्तको भएर उसलाई चाहिएको जति ऋण देओ।
 “मानव पुत्र ठूलो महिमामा स्‍वर्गदूतहरूसँग आएर आफ्‍नो सिंहासनमा बस्‍नेछन्। त्‍यस बेला पृथ्‍वीका सबै जातिहरू उनको अगाडि उभिनेछन् अनि गोठालाले बाख्रा र भेडाहरूलाई छुट्ट्याएजस्‍तै उनले ती मानिसहरूलाई पनि छुट्ट्याउँनेछन्। उनले भेडाहरू जतिलाई आफ्‍नो दाहिने हातपट्टि र बाख्राहरू जतिलाई आफ्‍नो देब्रे हातपट्टि छुट्ट्याएर राख्‍नेछन्। उनले आफ्‍ना दाहिने हातपट्टिका मानिसहरूलाई भन्‍नेछन्, ‘ए मेरा पिता परमेश्‍वरबाट आशीर्वाद पाएका मानिसहरू हो! आएर संसारको सृष्‍टिदेखि नै तिमीहरूको लागि तयार पारेर राखेको राज्‍यमा बस किनभने म भोकाउँदा तिमीहरूले मलाई खुवायौ, तिर्खाउँदा पानी दियौ र म परदेशी हुँदा पनि तिम्रो घरमा मलाई स्‍वागत गर्‍यौ। म नाङ्गो हुँदा लुगा लगाइदियौ, बिरामी हुँदा हेरचाहा गर्‍यौ, झ्‍यालखानमा पर्दा मलाई भेट्‍न आयौ।’ “यो सुनेर परमेश्‍वरका आज्ञापालन गर्दैआएका मानिसहरूले उनलाई सोध्‍नेछन्, ‘प्रभु, हामीले तपाईंलाई कहिले भोकाएको देख्‍यौं र खुवायौं? कहिले तिर्खाएको देख्‍यौं र पानी दियौं? कहिले तपाईं परदेशी हुनुहुँदा हाम्रो घरमा तपाईंलाई स्‍वागत गर्‍यौं? कहिले तपाईंलाई नाङ्गो देख्‍यौं र लुगा लगाइदियौं? कहिले तपाईंलाई बिरामी देख्‍यौं र हेरचाहा गर्‍यौं? अनि कहिले झ्‍यालखानमा पर्नुभयो र हामी भेट्‍न आयौं?’ तब सिंहासनमा बस्‍ने राजाले जवाफ दिएर भन्‍नेछन्, ‘साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍छु, मेरा भाइहरूमध्‍ये सबैभन्दा सानालाई तिमीहरूले जे गर्‍यौ, त्‍यो मलाई नै गरेका हौ।’ “त्‍यसपछि उनले आफ्‍ना देब्रे हातपट्टि भएकाहरूलाई भन्‍नेछन्, ‘ए परमेश्‍वरको सराप परेका मानिसहरू हो, यहाँबाट गइहाल! शैतान र उसका दूतहरूलाई तयार पारिराखेको कहिल्‍यै ननिभ्‍ने आगोमा जाओ! किनभने म भोकाउँदा तिमीहरूले मलाई खुवाएनौ, तिर्खाउँदा पानी दिएनौ। म परदेशी भएर आउँदा तिमीहरूले मलाई आफ्‍नो घरमा स्‍वागत गरेनौ, नाङ्गो हुँदा लुगा लगाइदिएनौ। म बिरामी हुँदा र झ्‍यालखानमा पर्दा तिमीहरू मलाई भेट्‍न आएनौ।’ “अनि तिनीहरूले सोध्‍नेछन्, ‘प्रभु, कहिले हामीले तपाईंलाई भोकाउनुभएको, तिर्खाउनुभएको, परदेशी हुनुभएको, नाङ्गो हुनुभएको, बिरामी हुनुभएको अनि झ्‍यालखानमा पर्नुभएको देखेर पनि तपाईंको वास्‍ता गरेनौं?’ त्‍यस बेला सिंहासनमा बस्‍ने राजाले तिनीहरूलाई भन्‍नेछन्, ‘साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍छु, मेरा भाइहरूमध्‍ये सबैभन्दा सानालाई सहायता नगर्नु नै मलाई नगर्नु हो।’ अनि तिनीहरूले चाहिँ सधैँभरिको दण्‍ड पाउनेछन्, तर परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्नेहरूले चाहिँ अजम्‍मरी जीवन पाउनेछन्।”
गरीब र असहायहरूका निम्‍ति तपाईं बलियो शरणस्‍थान हुनुहुन्‍छ। तपाईंले तिनीहरूलाई आँधीबाट शरण र डढाउने घामबाट छायाँ दिनुभएको छ, निष्‍ठुर मानिसहरूले पर्खालमा ठोकिएको आँधीझैँ
धर्मी मानिसले गरीबको हक बुझ्‍दछ तर दुष्‍टहरूले त्‍यस्‍तो कुरा केही बुझ्‍दैनन्।
हे परमप्रभु, म जान्‍दछु कि तपाईंले दरिद्रहरूका पक्षका कुरा र दु:खीहरूका हकको रक्षा गर्नुहुन्‍छ।
उसले गरीबको न्‍याय गर्दथ्‍यो र सबै कुरामा उसलाई राम्रो भयो। म परमप्रभुलाई चिन्‍नु भनेको यही होइन र?
१ शमूएल २:८
उहाँले गरीबलाई धूलोबाट उठाउनुहुन्‍छ, अभावमा परेकाहरूलाई तिनका कष्‍टदेखि उचाल्‍नुहुन्‍छ। उहाँले तिनीहरूलाई राजकुमारहरूका साथी बनाउनुहुन्‍छ, र आदरका स्‍थानहरूमा राख्‍नुहुन्‍छ। पृथ्‍वीका जगहरू परमप्रभुकै हुन्; तीमाथि उहाँले संसार बसाल्‍नुभएको छ।
उनले तिनीहरूलाई जवाफ दिए, “दुईटा दौरा हुनेले दौरा नहुनेलाई देओस्। त्‍यस्‍तै खानेकुरा हुनेले नहुनेलाई देओस्।”
तिम्रो छेउमा बस्‍ने इस्राएली छिमेकी गरीब भएर आफ्‍नो पोषण भार थाम्‍न नसक्‍ने भयो भने जसरी ज्‍यामीलाई ज्‍याला दिन्‍छौ, त्‍यसरी त्‍यसको पनि तिमीहरूले देखभाल गर्नुपर्नेछ र त्‍यो मानिस तिम्रा छेउमा बसोबास गरिरहन सकोस्।
 सक्‍छौ भन्‍दैमा दरिद्रबाट अनुचित फाइदा नलेओ। अदालतमा असहाय हुनेहरूबाट अनुचित फाइदा नउठाओ। परमप्रभुले तिनीहरूको मुद्दा बहस गर्नुहुनेछ र तिनीहरूको जीविका लुट्‍नेहरूलाई पनि उहाँले लुट्‍नुहुनेछ।
“मुद्दामा निर्णय दिँदा तिमीहरू इमानदार र न्‍यायी हुनू। गरीबतर्फ पनि नलाग्‍नू, धनीको डर पनि नमान्‍नू।
 “बोल्‍न नसक्‍नेहरूका निम्‍ति तैँले बोलिदे, सबै असहायहरूको हकको रक्षा गर्‌। तिनीहरूको पक्षमा बोलिदे र ठीक न्‍याय गर्‌। दरिद्र र कङ्गालीहरूको हकको रक्षा गर्‌।”
परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “अब म आउनेछु किनभने दरिद्रहरू सताइएका छन् र सङ्कटमा परेकाहरू पीडाले छट्‌पटाइरहेका छन्, तिनीहरूले खोजेको सुरक्षा म तिनीहरूलाई दिनेछु।”
आफ्‍नो पूरा हृदयले म परमप्रभुलाई भन्‍नेछु, “तपाईंजस्‍तो अरू कोही छैन। तपाईंले निर्धालाई बलियोबाट र दरिद्रलाई सताउनेहरूबाट रक्षा गर्नुहुन्‍छ।”
त्‍यो र त्‍यसका छोरीहरू प्रशस्‍त खानेकुरो भएकोले घमण्‍डी थिए र तिनीहरू शान्‍तिसित चुपचाप जीवन बिताउँथे तर तिनीहरूले गरीब, दु:खी र आफ्‍ना हक हराएकाहरूको वास्‍ता गर्दैनथे।
 “म यस्‍तो प्रकारको उपवास चाहन्‍छु: अत्‍याचारका साङ्ला र अन्‍यायका जुवा तोडिदेऊ र अत्‍याचारमा परेकाहरूलाई फुक्‍का गरिदेऊ। भोकाउनेसित आफ्‍नो भोजन बाँडिखाऊ र घर नभएका गरीबलाई आफ्‍नो घर खोलिदेऊ। नाङ्गाहरूलाई कपडा देऊ र आफ्‍ना नातेदारहरूलाई सहायता गर्न इन्‍कार नगर।
गरीबमाथि हाँस्‍नेले तिनीहरूको सृष्‍टिकर्ता परमेश्‍वरको अपमान गर्छ। अरूको दुर्भाग्‍यमा रमाहट गर्नेले सजायँ पाउँछ।
१ यूहन्ना ३:१७-१८
 संसारको धन-सम्‍पत्ति हुनेले आफ्‍नो भाइको खाँचो देखेर पनि मन कठोर पार्छ भने कसरी त्‍यस्‍तो मानिसले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छ? मेरा बालक हो! हामीहरू बोली र कुराले मात्र प्रेम नगरौं, हाम्रो प्रेमचाहिँ साँचो हुनुपर्छ। यस्‍तो प्रेम कामद्वारा देखिन्‍छ।
तब सिंहासनमा बस्‍ने राजाले जवाफ दिएर भन्‍नेछन्, ‘साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍छु, मेरा भाइहरूमध्‍ये सबैभन्दा सानालाई तिमीहरूले जे गर्‍यौ, त्‍यो मलाई नै गरेका हौ।’
 उसलाई खुल्‍ला हातले बिनास्‍वार्थ देओ र तिमीहरूले गरेको हरेक काममा परमप्रभुले तिमीहरूलाई आशिष् दिनुहुनेछ। सधैँ कोही न कोही इस्राएली गरीब र अभावमा हुनेछ र तिनीहरूप्रति उदार-चित्तका होओ भनी म तिमीहरूलाई आज्ञा गर्दछु।
सार्वभौम परमप्रभुले आफ्‍नो आत्‍माले मलाई भन्‍नुभएको छ। उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभयो र गरीबलाई सु-सन्‍देश सुनाउन, टुटेका हृदयहरू बिसेक गराउन, कैदीहरूलाई छुटकारा र झ्‍यालखानमा थुनिएकाहरूलाई स्‍वतन्‍त्रताको घोषणा गर्न पठाउनुभयो।
एक-अर्काको भार उठाउने गर। यस्‍तै गरेर ख्रीष्‍टको व्यवस्था तिमीहरूले पूरा गर्नेछौ।
एक-अर्काको भलाइ गर्न र मद्दत गर्न नबिर्स। परमेश्‍वरलाई मन पर्ने बलिदान यही नै हो।
प्रभु ख्रीष्‍टका पवित्र जनहरूलाई खाँचो पर्दा सहायता देओ, घरमा आएका पाहुनाहरूको सेवासत्‍कार गर
 मानिसहरूले यूहन्‍नालाई सोधे, “त्‍यसो भए हामीले के गर्नुपर्ने हो त?” उनले तिनीहरूलाई जवाफ दिए, “दुईटा दौरा हुनेले दौरा नहुनेलाई देओस्। त्‍यस्‍तै खानेकुरा हुनेले नहुनेलाई देओस्।”
“जब मेरा प्रजाले खाँचो परेर पानी खोज्‍दछन् र जब तिर्खाले तिनीहरूका घाँटी सुकेका हुन्‍छन्, तब म परमप्रभुले तिनीहरूका प्रार्थनाको उत्तर दिनेछु। म, इस्राएलका परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई कहिल्‍यै त्‍याग्‍नेछैनँ।
“परमप्रभु तिम्रा परमेश्‍वरले दिन लाग्‍नुभएको देशका कुनै सहरमा एउटा सङ्गी इस्राएली अभावमा छ भने तिमीहरू स्‍वार्थी बनी उसलाई मद्दत गर्न इन्‍कार नगर।
देशका मानिसहरूले ठग्‍छन् र चोर्छन्। तिनीहरूले गरीब असहायहरूमाथि अत्‍याचार गर्छन् र परदेशीहरूबाट अनुचित फाइदा उठाई अन्‍याय गर्छन्।